छाला चाहुरियो ? यस्ता छन् तन्नेरी देखिने घरेलु उपाए – ।।दाङ खबर।।
Home / जीवन शैली / छाला चाहुरियो ? यस्ता छन् तन्नेरी देखिने घरेलु उपाए
२०७४, २१ मंसिर बिहीबार ०६:२७	जीवन शैली
दाङ खबर- वृद्ध हुदैं गएपछि प्राकृतिक तत्वले छालाको तन्किने र लचिलोपनलाई घटाउँदछ । आज हामी तपाइँलाई यस्को घरेलु उपचारबारे जानकारी दिन्छौं । जस्ले तपाइँको छालालाई चाउरी पर्न र खुकुलो हुनबाट बचाउँछ । साथै यसले छालालाई तन्काई लामो समयसम्म जवान देख्न मद्धत गर्दछ ।
२०७४, २१ मंसिर बिहीबार ०६:२७
Previous आज – २१ मंसिर २०७४ बिहिवारको राशिफल
Next प्रदेश र प्रतिनिधिसभाकाे मतदान अाज, मतगणना आजैबाट शुरु हुने
२०७४, ११ फाल्गुन शुक्रबार १५:०७
२०७४, ११ फाल्गुन शुक्रबार १५:०३
२०७४, ११ फाल्गुन शुक्रबार १४:५६
गर्भधारण अगाडि पति–पत्नीले के गर्ने, के नगर्ने
२०७४, ११ फाल्गुन शुक्रबार १३:४३
विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी आयात रोकिँदै
२०७४, ११ फाल्गुन शुक्रबार १३:२४
एउटै माछाको मूल्य ३२ करोड
२०७४, ११ फाल्गुन शुक्रबार १३:०१